Somali | Bloomington Public Schools
Waalidiinta ku hadla luuqada afka Somaliga waxan u heyna kheyraad/resources oo ka mid ah isdiiwaangelinta, account-ka qadada, sida bus lagu heli karo iyo xaga technology-ga. Xafiiska district-ga iyo iskuulada waxaa ka shaqeeyan dad ku hadla afka- Somaliga.
Dhamaan bogagga ku qoran website-ka lama tarjumanin, laakin button-ka tarjumaandda ee Google aya ka heli karta website-ka.
Hadii aad qabto wax su’aal ah fadlan lasoo xariir:
Equity Specialist, Somali
Main Phone: 952-681-6410
Monday- Thursday: 952-806-8976
Main office: 952-681-6588
Ama soo wac:
Qadka/Line Caawinada Luuqadaha: 952-681-6412
Dhaman qoysaska waxay iska registration/diiwangalinta online. Wixii caawimaad ah ee ku saabsan isdiiwaangalinta fadlan la soo xiriir
Main office 952-681-6588
Qadka/Line Gargaarka Luuqadaha: 952-681-6412
Iskuul ka badalida Dagmada dhaxdeeda
Walidiinta dagan Bloomington haday doonayan in ay badashtan iskuulka sanadka soo socda, waa inay buuxsadan warqada arjiga ee lagu codsado badalida. (Sharciyda halkan ka eeg 503.2 Diiwangalinta ardayga/badalida School Board Policies & Regulations.)
Hadii aad wax su’aal ah qabtid fadlan la xiriir maamulaha iskuulka.
Shaqaalaheena adeega caafimaadka ee iskuul walba wuxuu lashaqeeyaa ardayda, qoysaska, shaqaalaha iyo dhamaan bulshada si kor loogu qaado caafimaadka ardayda, guulna laga gaaro tacliintoda:
Ogolashaha Talalka ardayda
Ilalinta caafimadka ardayda jirooyinka qaba
Haday wax dag dag ah/emergence ay dhacan shaqalaha waxay haystan wax ka cawiya.
La socodka tixraaca caafimadka ardayda
Hirgalinta barnamijyada baritanka
Ka hortaga cudurada la isku daarto
Waxaan heyna xarun caafimad Health Commons at Pond oo bilaash ah loogu talagaley qooysaska ardaydooda ay dhigtan Iskuuladka Dadweynaha Bloomington. Soo wac xiliga uu clinic-ga furanyahay
Rashinka iyo Habka ay u Shaqayso
Barnaamijka Xafiiska Raashinka ee Iskuuladka Dadweynaha Bloomington waxay maalin walba adeeg qado caafimad iyo nafaqo leh u diyaariyan in ka badan 7,000 oo isugu jira arday iyo shaqaalo. Dhamaan iskuuladkeena quraac ayey bixiyan.
2019-20 Qiimaha Rashinka:
Qadada ardaya oo caano raacsan:
Iskuulka Hoose: $2.75
Iskuulka Dhaxe: $3.00
Iskuulka Sare: $3.05
Quraacda ardaya oo caano raacsan:
Kindergarteners - quraac waa bilaash
Iskuulka Hoose: $1.40
Iskuulka Dhaxe - no cost for breakfast
Iskuulka Sare: $1.55
Caanaha Kaliya: $.50
Raashinka bilaashka ah ama la qiimo jaban.
Qoosaska waxa laga yaaba inay xaq u leeyihin raashinka iskuulka ee bilaashka ah ama la qiimo jabiyey. Si aad u codsatid waa inad sanad walba soo buuxisa sanad walba codsiga kaalmeynta waxbarashada.
Numberka kaydka/Account cuntada.
Raashinka ardayga PIN (Number-ka Aqoonsiga Qofka) waxaad ka heli karta Hub-ka. Fadlan ka caawi in ilmahada ay xafidan number-kas. Number-ka ayey ardayda intay iskuulka dhiganayan heysanayan.
Waxaad eegi kartan ardayga inta lacag ee ugu hartay account-ka iyo waxad kaloo suubin karta inad online-ka ku bixin karto lacagta adigoo account ka suubsanaya www.paypams.com.
Macluumadka Bus-ka waxaad ka heli karta Hub-ka. Hadii aad dagan tihiin meel iskuulka u dhow ama lug looga imaan karo sida wixii ka yar .5 miles iskuulka hoose, iyo wixii ka yar 1.25 mark loo eego fasalada 6 ilaa iyo 12. Waxaa laga yaba inaad xaq u yeelato barnamijka loogu magac daray Pay to Ride. Markii lacagta la bixiyo kadidb, ardayga wuxuu istaagi kara meesha ugu dhow ee bus-ka soo istaago. Xarunta Gaadiidka la xiriir wixii su’aal ah: 952-681-6300
Hadii aad heysato arday u baahan bus ka duwan midka caadiga ah, fadlan kala hadal ruuxa u xilsaaran wax barashada gaarka ama case manager ama soo wac Xafiiska Adeega Ardayda 952 681 6504.
Gudiga Waxbarashada waa kuwa wax walba u ansixiya iskuuladka Bloomington. Inkastoo gudigu uu mas’uul kayahay sida ay barnamijyada u socdan iyo in ay wax walba si sharciyeysan u wadan, hadana wax ka mid ah mus’uuliyadan waxa is kaleh Hogamiyaha iskuuladka/Superintendent. Gudiga Waxbarashada waxa xukuma Gudoomiye iyo Gudoomiye ku xigeen kuwas oo laga soo doorta gudiga waxbarshada.
Sida uu u socdo Kulanka Gudiga
Gudiga wuxuu kulma bisha isniinta 2ad iyo isninta 4ad sacada markay tahay 7 pm. Waxayna ku kulman qolka bulshada ee Xarunta Shaqalaha Waxbarasho ee cinwankeed u yahay 1350 West 106th Street, Bloomington, MN.
Kulanka gudiga iskuulka waxaa laga soo daya BEC-TV, channel 15, waxana lasoo daya xiliga 1:00 a.m., 7:00 a.m., iyo 1:00 p.m. malinta ku xigtana waa lasoo daya, waxad kaloo dawan karta isbuuca ka danbeya. Kulanada badankod waxad ka dawan karta "On Demand" - Halkan ka baar kulamada. Sidoo kale halkan ka daawo Live Stream of BEC TV.
Su’aal waxad ku soo dirsan karta
Hogamiye ku xigeenka
Xafiiska Sinanta Waxbarashada
Ujeedada Xafiiska Waxbarashada Xaquuqda waa in la hormariyo is dhaxgalka dhaqamada kala duwan si kor loogu qaado ardayda in ay heersare gaaran la lana siiyo tababar shaqalaha iyo waalidkaba u kordhiyan is dhaxgal iyo isfahanka wajiyada iyo dhaqamada kala duwan ee ah bulshada dhigata iskuuladka Bloomington.
Ruuxwalba in uu asalkiisa uu yahay wax qiimo badan.
Ruuxwalba wuxuu leeyahay xuquuq loona dhaqmo xushmad iyo xigmad.
Dhaman shaqalaha, ardayda iyo walidiinta waxay xaq u leeyihin in loo la dhaqmo cadaalad.
Qof walbana wuxuu mas’uul ka yahay wuxuu gaysto.
Nabad galinta deeganka waxay muhiim u tahay jiritanka dhaman bulshada.
Soodhawaynta deeganka waxay horumat u tahay dhaman wadanimada .
Hor marinta rabitankada waxay hor kacda wax qabad wanagsa.
Kala duwanta waxay wanajisa bulshada.
Qosaska waxay muhiim u yihiin waxbarashada caruurtoda. Xigmad iyo daacad waa muhiim.
Language Assistance Line: 952-681-6412